यस कारण विना मगरको मन्त्रालय धरापमा, अब के होला ?
ARCHIVE, POLITICS » यस कारण विना मगरको मन्त्रालय धरापमा, अब के होला ?
काठमाडौं - खानेपानी मन्त्री विना मगरको मन्त्रालय धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणपछि संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ । संविधान संशोधनबारे सरकारसँग भएको सहमतिको मस्यौदा तयार भइसकेको र मन्त्रालयको संख्यासमेत टुंगो लागेकाले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको हो ।